Home Wararka Falxumadii ka dhacday Doorashadii(Boobkii) Sanetka, Ma keeni kartaa in Dagaal ka Dhaco...
Falxumadii ka dhacday Doorashadii(Boobkii) Sanetka, Ma keeni kartaa in Dagaal ka Dhaco tan Aqalka Hoose?
Doorasho beenaadyadii Sanetka oo is daba socday ee aynu dhammaanteen marqaatiga ka ahayn waxay dalkeenna gelineysaa xaalad aad u halis ah, waxaana la hubaa in doorashada golaha shacbiga ay gacan ka hadal ku dambeyn doonto marka la eego sida ay u dhacday tan aqalka sare oo ay qoysas isu codeeyeen. Waxaa hadda socda in dhammaan mishiinada Waraaqaha Aqoonsiga (ID-Cards), lagu sameeyo inay madaxda qaar DG iyo wasiirka Arrimaha Gudaha ay guryahooda dhigteen kadibna loo soo sameyn doono oo kaliya dad gaar ah oo hebel u codeyn doona.
Waa tee ceebta ka weyn ee loo joogsan karo wixii ka dhacay goobaha lagu soo doortay(xoogay) xildhibaanadii aqalka sare ee ku matali lahaa DG barlamanka dalka . Dunida doorashooyinka musuqmaasuq waa ka dhacaa sida tirinta iyo tirada ama laba jeer codeynta iyo waxyaabo la mid ah laakiin kama dhacaan waxa ka dhacay DG dalka doorashadii senetarada Aqalka sare ka dhacay oo ceeb iyo yaxyac leh. Eedadey ayaan u tanazulay, MW Maxamed Cabdullaahi ayaan u tanazulay iwm.
Dhammaan xildhibaanada aqalka sare ku soo baxay waxaa lala tartansiiyey ehelkooda iyo shaqaalahooda si ay u soo baxaan. Sidaas darted aqalka sare inta hadda u soo baxday waa xaaran mana ah doorasho sax ah oo waa inaan hadda laga aqabalin si aqalka hoose uusan dagaal u keenin.
Dhallinyaro la soo ururiyey oo aan taariikh wax qabad iyo mid shaqo iska dhaafe aan xataa Af Somali akhriyi Karin in loo soo taago inay DG matasho runtii waa gef weyn oo ay mudan yihiin lagula xisaabtammo madaxweynayaasha DG oo taariikhda k ugali doono waxa ay sameeyeen. Sidoo kale waxay MW-yaasha DG u muuqdaan inaysan aakhiro imaaneyn oo aysan ogeyn in amaanadii loo dhiibay rabbi hortiisa ku dayaceen. Xaqa adanaha qiyamaha lalama sugo oo dunida ayaa la isaga gooyaa waana xaq aadami waxa aad gasheen ee ogaada inaydan la dhimaneyn.
Ifafaalaha ka soo muuqanaya waxyaabaha yaabka leh ee sida u talagalka ah loo sameynayo waxaa ka dhalan kara:
In dalku uu galo dagaal sokeeye, wayoo tan aqalka hoose oo ka badan kan sare in qoryo la isu qaato sida liiska waa kaa reebay iyo igama reebi kartid, waa lagaa guuleystay iyo la igama guuleysan karo iwm.
Guddiyada oo aan wada ognahay inay yihiin gacan ku rimis kuwaan hadda wax maamulaya ay soo magacaabay oo khibrad, aqoon iyo waddanimo midna laguma soo magacaabin ee waxaa lagu keenay rabitaanno shkhsiyadeysan, iyaguna ma laha korriinsho aqooneed oo ay ku fahmaan waxa loo soo sheegay inay khaldan yihiin iyo inay ku jiraan mustaqbalkooda iyo kii ilmahooda oo maanta cagta marinayaan, aakhirana cadaab ku muteysanayaan.
Sikasataba haku dhacdee inuu Farmajo awood u yeesho inuu doorashada qaso kadibna uu yiraahdo waan tirtiray iwm inkasta oo aan ogeyn sharciyadda arrintaas iyo sida ay ku dhici karto.
In beesha Caalamka ay ku dhawaaqdo doorashada waxay ahayd mid aan aysan aqoonsaneyn waxa ka soo baxaa , taas oo uusan dalkeenna maanta qaadi Karin.
Haddba maanta cid kasta oo daneyneysan dalka waa inay ka dhiidhiidaa waxaa la wado iyo sida ay wax u socdaan. Ma muuqato inay jirto cid hadda ku baraarugsan sida ay wax u socdaan inay keeni karaan in dalku galo dagaal halis ah, waayo doorashooyinka waxay halis u yihiin inay dagaal abuuraan sida ka dhacday Kenya iyo waddamo badan oo dunida ah.
Siyaasiyiinta, aqoonyahanka, murashixiinta, dhallinyarada, hawwenka, culimada iyo odayaasha dhaqankaba maanta waxa horyaalla masiirkii dalka maanta oo uu qabasho leeyahay , laakiin haddii ay doorashadaan u dhacdo si heshiis lagu yahay dalkaan waa badbaadi karaa laakiin haddii ay ku dhamaato sida kuwa aan aragnay ay rabaan waxaan halis ugu jirnaa inuu dalkeenna mar kale burburo.
Muqdisho Online Waxay 2017 sheegtay in dalkaan Maxamed Cabdullahi Farmajo uu geyn doono meel halis ah, (https://muqdisho.online/madaxweyne-qarankan-qabiil-ha-u-celin/) . Maantana halkaan ayaa la joogaa oo 2017 haddii laga qaban lahaa maanta halkaan lama joogeen, sidoo kale haddii aan maanta la qaban ilmahaaga oo la karsanayo oo dab saaran adiguna aad qosleysid ayaa loo tagi doonaa ee halkaaga ku sug.